यज्ञमा हवन गर्दा ‘स्वाहा’ किन भनिन्छ ? यस्तो छ महत्व - Internet Khabar
यज्ञमा हवन गर्दा ‘स्वाहा’ किन भनिन्छ ? यस्तो छ महत्व
January 5, 2019 January 6, 2019 Internet Khabar
‘स्वाहा’को महत्व हामीमध्ये धेरैजनालाई थाहा छैन। ऋग्वैदिक आर्यहरुले यज्ञ गर्ने परम्पराका दौरान देवतासमक्ष हवन गरिएकाे सामग्री पुर्याउनका लागि अग्निको प्रयोग आरम्भ गरे। किन्तु यज्ञ वेदीमा हवन गर्ने बेला ‘स्वाहा’ शब्दको उच्चारण गरिन्थ्यो । वास्तवमा ‘स्वाहा’को अर्थ आफैंमा धेरै रोचक छ।
भगवानको पूजाका लागि विहान सबै भन्दा उत्तम समय किन ?
तिहारको तेस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा, श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदै(भिडियो)
तान्त्रिकहरूले काला जादू गर्न कुन वस्तु प्रयोग गर्छन् ?